छोरीको कुरारित्व भंग गर्न सेक्स क्याम्पमा किन पठाइन्छ ? – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ०३, २०७५११:०१0
एजेन्सी । अफ्रिकाको मलावीमा आमाबाबुहरु आफ्ना छोरीहरुलाई सेक्स क्याम्पमा पठाउँछन् । त्यहाँ छोरीको उमेर १० वर्ष पुगेपछि कुमारित्व भंग गर्न भन्दै सेक्स क्याम्प पठाउने चलन छ। १० वर्षकी ग्रेसलाई गोल्डेन भिलेजस्थित घर नजिकैको क्याम्पमा पढाएर यौन शिक्षा दिइयो। उनी क्याम्पमा आफ्नी हजुरआमासँग बसिन्, जहाँ उनलाई एक सातासम्म ठुलाको सम्मान तथा घरधन्दा गर्न सिकाइयो।
गर्ल्स इन्पावरमेन्ट नेटवर्कका सञ्चार सल्लाहकार न्वायसका अनुसार कहिलेकाहिँ त्यहाँ वयस्क पुरुषहरु आउँछन्। राति आउने त्यस्ता पुरुष को हुन् भन्ने जानकारी किशोरीलाई हुँदैन । तर, उनीहरुले यौन शिक्षाअन्तर्गत ती भुसतिघ्रेहरुलाई सन्तुष्ट पार्न सक्नुपर्छ । यौन शिक्षाको यो प्रक्रिया सुरुमै कतिपय किशोरी आमा बन्ने अवस्थामा पुग्छन्। नेपाल समाचारपत्रबाट
शाहिद कपुरकी श्रीमती २३ वर्षमै दोस्रोपटक गर्भवती
एक सय दस वर्ष बुढो रुखको ठुटोमा बनाइयो यस्तो आश्चर्यजनक पुस्तकालय!
महिलाले यी कुरालाई सुधारे बन्छ दिगो सम्बन्ध ! हेर्नुहोस् यस्तो छ महिलाले सुधार्नुपर्ने कुराहरु !
किन लगाउँछन् मुस्लिम महिलाले बुर्का ? यस्तो छ वास्तविक कारण
विश्वमा अहिलेसम्म देखिएको सबैभन्दा अनौठो टाटु ! जुन देख्नुभयो भने छक्क पर्नुहुनेछ !